नेपालमा जोखिम झन् बढ्दो, अबको ५५ दिनमा ४० हजार संक्रमित पुग्ने आँकलन – Online Nepal
नेपालमा जोखिम झन् बढ्दो, अबको ५५ दिनमा ४० हजार संक्रमित पुग्ने आँकलन
June 22, 2020 183
काठमाडौं । नेपालमा आगामी २ भदौसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४० हजार पुग्ने आँकलन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालको अवस्थालाई सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै सो आँकलन गरेको हो ।
लकडाउन खुकुलो हुँदै जानु, सिमानाका जोडिएको देश भारतबाट आउने क्रम बढ्नु, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको ट्रेसिङ सुस्त गतिमा हुनुलगायतका कारणले संक्रमणको जोखिम बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले दैनिक झन्डै ३ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्ति भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
संक्रमितको संख्या बढ्दै गए ४० हजारमध्ये २ हजार जना गम्भीर प्रकृतिका हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जुटेको छ । हाल देशभर १ हजार भेन्टिलेटर, १ हजार ८ सय आईसीयू बेड स्थापना गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजसँग बेड संख्या र लागत खर्चका बारेमा विवरण माग गरिएको छ । लागत खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।
यस्तै, आगामी १५ असारदेखि दैनिक १० हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको छ । हाल दैनिक ६ हजार जनाको दैनिक पीसीआर परीक्षण गरिरहेको र निजी क्षेत्रबाट दैनिक ३ हजार जना बढीको परीक्षण गरिनेछ । विदेशबाट आएकाहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढेकाले स्वाबका नमुनाहरु होल्ड भएको हो ।
सरकारले आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । लक्षण नदेखिएका तर पोजेटिभ केस भएकालाई ती आइसोलेसन सेन्टरमा राखिने तयारी थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । आइसोलेसनमा चिकित्सकको टिम राख्ने मन्त्रालयको योजना छ । संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि १ हजार ७५ वटा टिम परिचालन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा टिममा तीन जना रहने गरी ३ हजार २ सय २५ जना कर्मचारीहरु खटाइने सरकारको योजना रहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
Prevसुशान्तले ३ दिन अगाडि स्टाफलाई तलव दिँदै यस्तो भनेका रहेछन…
Nextपुनः पूर्ण लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी
पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोले ज्यान गुमाएकाहरुको सामूहिक अन्त्येष्टि, श्रीमान श्रीमतीलाई एउटै चितामा जलाइयो !
लक्ष्मीपूजा गरिसकेपछि यी ४ चिज देखिएमा सम्झिनुस् घरमा लक्ष्मीको वास भईसक्यो